Ciidamada amaanka oo Caawa howlgal dhalinyaro badan lagu soo q... | Universal Somali TV
Ciidamada amaanka oo Caawa howlgal dhalinyaro badan lagu soo qabtay ka sameeyay xaafadaha degmada Warta Nabada ee Muqdisho.
Ciidamada amaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa Caawa howlgal balaaran ka sameeyay qeybo kamid ah degmada Warta Nabada ee magaalada Muqdisho
Howlgalka meelaha sida gaar ah looga sameeyay ayaa ah inta u dhexeysa Carwo Ikto ilaa Cali Kamiin, waxeyna Ciidamada gudaha u galayeen guryaha ku yaala degmada, halkaasoo ay dibadda u soo saarayeen wixii dhalinyaro ah ee ku jira.
Howlgalka oo ay sameynayeen Ciidamada booliska, ayaa intii uu socsday waxa uu saameeyay isu socodka gaadiidka iyo goobaha ganacsiga, waxaana howlgalka lagu soo qabtay dhalinyaro farabadan kuwaasoo laga shakiyay.
Qaar kamid ah raggii howlgalka lagu soo qabtay, ayaa Warbaahinta gudaha u sheegay in Ciidamada ay Saldhigyadooda u kaxeysteen qaar kamid ah dadkii la soo qabtay kuwaasoo lagu tuhmayo iney xiriir la leeyihiin Kooxaha dilalka ka geysta magaalada Muqdisho.
Howlgalka, ayaa ku soo beegmayo iyadoo dhowaan Al-Shabaab ay degmada Warta Nabada ku dileen Taliyihii Saldhiga degmadaasi Macalin Daahir, iyadoo durba Taliska booliska gobolka Banaadir uu taliye cusub u soo magacaabay degmada, kaasoo howlgalka Caawa hoggaaminayay.
Kan-xigaMadaxweyne Trump oo Ilhaan Cumar ugu ...
Kan-horeRW Khayre oo gudoomiyay Shirka tubta ...
47,338,537 unique visits